ကြေးနီစီမံကိန်း ပြဿနာ အေးအေးချမ်းချမ်း ပြေလည်စေချင် – ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် - DVB
ကြေးနီစီမံကိန်း ပြဿနာ အေးအေးချမ်းချမ်း ပြေလည်စေချင် – ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီးစီမံကိန်း ပြဿနာ ကို အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ပြေလည်စေချင်တယ်လို့ သူရဲ့ မိန့်ခွန်းမှာ ပြောဆိုပါတယ်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာမြို့ကို နေ့လယ် ၂ နာရီလောက်မှာ ရောက်ရှိခဲ့ပြီးနောက် ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ညနေ ၄ နာရီကျော်လောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနောက် လက်ပန်းတောင်းတောင် ကံကုန်းကျေးရွာမှာ ဒေသခံတွေကို မိန့်ခွန်းပြောကြားရာမှာ ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။
“ကိုယ်လုပ်ချင်သလို လုပ်လို့ မရဘူး။ အများနဲ့ ညီအောင်လို့ အများကောင်းကျိုးအတွက် တခါတလေ ကိုယ့်ရဲ့ အကျိုးကို အနောက်မှာ ထားပြီး လုပ်ရတယ်။ အဲဒီလို လုပ်မှသာ တိုးတက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။”
“ဒီဒေသမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခက်အခဲတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျမတို့ဟာ နိုင်ငံကြီးသား အမြင်နဲ့ ဖြေရှင်းရမယ်။ ကျမတို့ နိုင်ငံကို အပြစ်မရှိတဲ့ နိုင်ငံ၊ အပြစ်မဲ့တဲ့ နိုင်ငံ၊ ကမ္ဘာက လေးစားတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်အောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ၊ ဘယ်လို နေမလဲ၊ ဘယ်လိုထိုင်မလဲ၊ ဘယ်လို ပြဿနာတွေကို ကိုင်တွယ်မလဲဆိုတာ ကျမတို့ ဆုံးဖြတ်ရလိမ့်မယ်။”
“ကိုယ့်နိုင်ငံ သိက္ခာရှိဖို့ဆိုတာ လူတိုင်း လူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံ သိက္ခာရှိဖို့ဆိုတာ လူတယောက်တည်းနဲ့လည်း မရဘူး။ အဖွဲ့အစည်း တခုတည်း လုပ်လို့လည်း မရဘူး။ အစိုးရချည်း လုပ်လို့လည်း မရဘူး။ ပြည်သူလူထုအားလုံး ပါဝင်မှ ကျမတို့ နိုင်ငံ သိက္ခာရှိအောင် ကျမတို့ လုပ်နိုင်မှာပါ။ ပြည်သူတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အခါမှာ ပြည်သူတွေ အကြိုက်ကို ကျမ အမြဲလိုက်ပြီးတော့ လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျမ မှန်တဲ့အတိုင်းပဲ ပြောမယ်။ ပြည်သူတွေက မကြိုက်ရင်လည်း မကြိုက်ဘူးလို့ ပြောပိုင်ခွင့် ရှိတယ်။ ကြိုက်ရင်လည်း ကြိုက်တယ်လို့ ပြောပိုင်ခွင့် ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမ သေသေချာချာ ကတိပေးနိုင်တယ်။ ကျမ ပြည်သူတွေကို လှည့်ဖြားတဲ့ နိုင်ငံရေးမျိုး လုပ်လို့ မရဘူး။
နောက်ပြီးတော့ တခဏတာ ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်ချင်လို့ လုပ်တဲ့ နိုင်ငံရေးမျိုးလည်း ကျမ မလုပ်ဘူး။ ကျမတို့ နိုင်ငံရဲ့ ရေရှည်အကျိုးကို ကြည့်ပြီးတော့ ကျမ လုပ်သွားမှာ။ ကျမတို့ နိုင်ငံရဲ့ ရေရှည် အကျိုးကို ကြည့်ပြီးတော့ လုပ်တဲ့အခါမှာ ကျမမှာ အားနည်းချက်တွေရှိလို့ ဆိုရင်လည်း ၀ိုင်းပြီးတော့ ပြုပြင်ပေးကြပါ။ ကျမ လက်ခံဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့ ပြည်သူတွေ ကလည်း သေသေချာချာ စဉ်းစားပါ။ သဘောထားကြီးရမယ်။ ရေရှည်အမြင်ရှိရမယ်။ ကျမတို့နိုင်ငံမှာ အဓိကလိုအပ်ချက်က အမျိုးသားပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေးပဲ။”
“အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးဆိုတာ ဘာလဲဆိုတော့ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်း မြောက်မြားစွာ ကွာဟနေတဲ့ အသင်းအဖွဲ့တွေ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေနဲ့ အုပ်စုတွေ စုစည်းပြီးတော့ နိုင်ငံ့အကျိုးအတွက်အတူ စွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ ဆိုလို့ရှိရင် ကျမတို့ ပြည်သူအားလုံးဟာ ရေရှည်အမြင်နဲ့လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ရေရှည်အမြင်နဲ့လုပ်မှ ကျမတို့ အောင်မြင်နိုင်မှာပါ။ အခု ဒီဒေသမှာဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေကို ကျမတို့နိုင်ငံ သိက္ခာရှိမယ့် ပုံစံနဲ့ ကျမ ဖြေရှင်းချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို လုပ်တဲ့အခါ ပြည်သူတွေက ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ ကူညီကြပါလို့ ကျမ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။”
“ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုသွားတဲ့အခါမှာ ပြည်သူတွေရဲ့ ထောက်ခံမှုကိုမရဘဲနဲ့ ကျမတို့အောင်မြင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ပြီး ပြည်သူတွေရဲ့ ထောက်ခံမှုဆိုတာ ပြည်သူအကြိုက် လွယ်လွယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ စိတ်ကလေးတွေ ချပြီးတော့ ပြည်သူရဲ့ ထောက်ခံမှုကို မမှန်မကန်နည်းနဲ့ ရယူရင် ရေရှည်မှာ အကျိုးမရှိပါဘူး။ ကျမ ပြည်သူနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း၊ မှန်မှန်ကန်ကန်၊ ရိုးရိုးဖြောင့်ဖြောင့် ဆက်ဆံမယ်။ မလှည့်ဖျားဘူး။ ကျမရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၊ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပြည်သူကမကြိုက်ရင်လည်း မကြိုက်ဘူးလို့ ပြောနိုင်တယ်။ ကျမ တခုခုလုပ်တယ်ဆိုရင် ဘာလို့လုပ်သလဲ ကျမရှင်းပြမယ်။ အခု ဒီဒေသမှာဖြစ်နေတဲ့ ကြေးနီစီမံကိန်းပြဿနာတွေကို ကျမ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ပြေလည်သွားစေချင်တယ်။ အေးအေးချမ်းချမ်းပြေလည်ရင် ကျမတို့ပြည်သူတွေလည်း သက်သာတယ်၊ နိုင်ငံလည်း သိက္ခာရှိတယ်။ ကျမတို့ အနာဂတ်အတွက်လည်း ကောင်းတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်တယ်။ ဒါကို ကျမကြိုးစားမယ်၊ ကြိုးစားပေမယ့် ကျမ အောင်မြင်တယ် မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာကတော့ ကျမက ဘယ်လိုမှ အာမခံချက်မပေးနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြည်သူကသာ ကျမနဲ့ လက်တွဲပြီး ပြေလည်မှုရှာမယ်ဆိုရင် အောင်မြင်မယ်လို့ ကျမ ယုံပါတယ်။”
“ကျမပြည်သူကို တခုပဲ တောင်းခံချင်ပါတယ်၊ သေသေချာချာ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ကျမက ဘယ်လိုပဲ ဆုံးဖြတ် ဆုံးဖြတ်. ကျမဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူး။ ကျမ လုပ်ငန်းရှင်နဲ့လည်းတွေ့ပြီးပြီ၊ သက်ဆိုင်ရာ ရွာသူရွာသားတွေ၊ လုပ်ငန်းကို ကန့်ကွက်တဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့လည်း တွေ့ချင်တယ်။ တွေ့ပြီး ဟိုဘက်ဒီဘက် အမြင် ၂ ခုကို ကြည့်ပြီးတော့ ကျမတတ်နိုင်သလောက် ပြေလည်အောင် ညှိပေးချင်တယ်။ ဒီလိုညှိပေးတာကို ပြည်သူတွေက သဘောတူရဲ့လား။”
“ကျမတို့ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာ အေးအေးချမ်းချမ်းနေချင်တယ်ဆိုတာ ကျမ ယုံကြည်တယ်။ ကျမတို့ဟာ အချင်းချင်းကြားမှာ စေတနာ၊ မေတ္တာနဲ့ နေချင်တယ် ဆိုတာလည်း ယုံကြည်တယ်။ လူသားတိုင်းဟာ ဒီလိုပါပဲ. စေတနာ၊ မေတ္တာနဲ့ နေရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ အင်မတန် အေးချမ်းပါတယ်။ ဒေါသတွေ ဟုန်းဟုန်းတောက်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာဟာ မအေးချမ်းနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျမတို့နိုင်ငံ အေးချမ်းဖို့အတွက် ကျမဟာ ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးနည်းလမ်းကို အစဉ်အမြဲပဲ လျှောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလျှောက်တဲ့အခါ ကျမနဲ့အတူ ပြည်သူ ပါလာမှ ကျမလုပ်ငန်းတွေဟာ အောင်မြင်နိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် ကျမကို ပြည်သူတွေက လမ်းမှာ ကြိုဆိုရင် ကျမအင်မတန်မှ အားတက်တယ်။ အားတက်တယ်ဆိုတာဟာ ကျမကို ကျန်းမာပါစေ အော်နေလို့ မဟုတ်ဘူး။ အသက်ရာကျော်ရှည်ပါစေ အော်နေလို့ မဟုတ်ဘူး။ ပြည်သူရဲ့ ထောက်ခံမှု ရှိရင် ကျမတို့ လုပ်ငန်းတွေ အောင်ချေအများကြီးရှိတယ်လို့ အားတက်ရပါတယ်။ မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာဟာ လွယ်ကူတဲ့အချိန် မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ဘက်က ခက်ခဲတဲ့ အချိန်မှာ ရပ်တည်ပေးသူများဟာ မိတ်ဆွေကောင်းပဲ။ ကျမတို့ရဲ့ ပြည်သူတွေဟာ ကျမရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေဖြစ်စေချင်တယ်လို့ ကျမ ရိုးရိုးပဲပြောပါရစေ။”
“ကျမအနေနဲ့လည်း ကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့ မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ချင်တယ်။ ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာ မိတ်ဆွေကောင်းအဖြစ် ရပ်တည်မယ်။ နောက်တခုက မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာ မှန်မှန်ကန်ကန် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆက်ဆံရတယ်၊ တောင်းဆိုရတယ်။ ကိုယ့်အကြိုက် လိုက်လိုက်ပြောတဲ့လူက မိတ်ဆွေကောင်းလို့ မထင်နဲ့နော်။ ဘယ်တော့မဆို ကိုယ့်အကြိုက်ကိုယ် လိုက်ပြီးပြောတာဟာ မိတ်ဆွေကောင်းများရဲ့ အလုပ်မဟုတ်ဘူး။ တကယ့်မိတ်ဆွေများဆိုတာဟာ ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကျိုးကို ရှေးရှုပြီးတော့ ပြောသင့်ပြောထိုက်တာကို ပြောမယ်၊ ထောက်ပြသင့်တာကို ထောက်ပြမယ်။ ကျမတို့ဟာ တဦးနဲ့တဦး ကျမတို့နဲ့ပြည်သူကြားမှာ တကယ့်ကို ကောင်းမြတ်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေရဲ့ ဆက်ဆံမှုမျိုး ဖြစ်စေချင်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျမတတ်နိုင်သလောက် ပြည်သူတွေနဲ့ တွေ့တယ်။ ပြောဆိုတယ်ဆိုတာဟာ ပြည်သူတွေနဲ့ ကျမတို့ရဲ့ ကြားမှာ နားလည်မှုတွေ တည်ဆောက်နိုင်အောင်လို့၊ ကျမတို့ကြားမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ သံယောဇဉ်တွေ တည်ဆောက်နိုင်အောင်လို့ ကျမ တွေ့ဆုံတာပါ။ တကယ်တော့ တယောက်ချင်း၊ တယောက်ချင်း တွေ့နိုင်ရင် ပိုကောင်းတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် သန်း ၆၀ ကို ဘယ်လိုလုပ် တွေ့နိုင်မှာလဲ။ သန်း ၆၀ ကို တယောက်ချင်းစီ မတွေ့နိုင်တော့ ဒီလိုပဲ တွေ့ရတာ။ တွေ့ရတိုင်းလည်း ကျမ၀မ်းသာပါတယ်။ ကျမတခါတလေ စိတ်ဆိုးရတာတွေ ရှိပါတယ်။ ပြည်သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ ကျမတို့ အဖွဲ့ဝင်တွေ လုပ်ပုံကိုင်ပုံမဟုတ်လို့။ ဒါပေမယ့် အဲလို စိတ်ဆိုးရတဲ့အခါကျရင်တောင်မှ ပြည်သူတွေကနေပြီး ပြုံးပြံးရွှင်ရွှင်နဲ့ ကျမကို ကြိုဆိုတဲ့အခါ ဒီစိတ်ဆိုးတာတွေ ပြေရပါတယ်လို့ ပြောပါရစေ။
“အခု တော်တော်လည်း မှောင်နေပြီဆိုတော့ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကျမ တောင်းပန်စရာ တခုရှိသေးတယ်။ ဒီလိုမှောင်တဲ့အချိန်ထိ စောင့်ရအောင် လုပ်ခဲ့တာကို ကျမတောင်းပန်ပါတယ်။ အဲဒါက ကျမတို့ မနက်တုန်းက မန္တလေးကနေပြီး မုံရွာကိုလာတော့ မုံရွာပြည်သူတွေက အင်မတန်မှ သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြိုဆိုလို့ တော်တော် နောက်ကျသွားတယ်။ လမ်းမှာ ဖြည်းဖြည်းပဲ သွားဖြစ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျမတို့ အရောက်နောက်ကျတယ်။ နောက်ကျလို့ လမ်းမှာ ကြိုဆိုတဲ့ ရွာသားတွေကို ကျမ အကုန်လုံး မနှုတ်ဆက်နိုင်တော့ဘူး။ အဲဒါကြောင့် လမ်းမှာ မနှုတ်ဆက်ခဲ့ရတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေကို တောင်းပန်ပါတယ်။ အခုလို မှောင်တဲ့အထိ စောင့်ရတဲ့ ဒီမှာ ရောက်နေတဲ့ ပြည်သူတွေအားလုံးကိုလည်း တောင်းပန်ပါတယ်။
“နောင်ဆိုရင်လည်း ကျမတို့ အများကြီး အတူတူလုပ်ရဦးမယ်။ ဒီလို မျက်နှာချင်းဆိုင် မတွေ့နိုင်သည့်တိုင်အောင် ကျမတို့နိုင်ငံ ကောင်းကျိုးအတွက် အားလုံး အတူလုပ်ရမှာပဲ။ အဝေးကနေလည်း ကျမတို့ ဆက်ပြီးလုပ်သွားရမှာပဲ။ တချို့ကျတော့လည်း ကျမတို့ရဲ့ ရှေးရေစက်အရ တခါပြန်ပြီး နီးနီးကပ်ကပ် ဆုံနိုင်မယ့်သူတွေလည်း ရှိမှာပါ။ ဒီလို နီးနီးကပ်ကပ် မဆုံနိုင်ရင်တောင်မှ တချိန်တခါမှာ ကျမတို့ဟာ အတူတူ ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ ပြဿနာတွေအတွက် စဉ်းစားပိုင်ခွင့် အတူတူထိုင်ပြီးတော့ တယောက်နဲ့ တယောက် မျက်နှာချင်းဆိုင်ပိုင်ခွင့်ရရမယ်လို့ မှတ်သားထားပါမယ်။ ကျမ ရင်ထဲမှာ ထိန်းသိမ်းထားပါမယ် လို့ ပြောရင်း နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။ အားလုံး ကျန်းမာကြပါစေ။ ဘေးရန်ကင်းပါစေ။”
Previous story အစိုးရက သပိတ်စခန်းများကို အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းသည့်အပေါ် အမြင်
Next story ဖမ်းဆီးခံရသည့် သံဃာ ၇ ပါး ပြန်လွတ်